China Umatshini wokushicilela weHydraulic uMvelisi kunye noMthengisi | IHanrui
Flat umatshini intloko
Umatshini ipolishi, Le polis ...
Umatshini wokushicilela weHydraulic yenye yezixhobo zokuvavanya amandla wombhobho ogqabhukileyo. Sebenzisa indlela yokutywinwa kobuso kunye netywina elibonakalayo, uvumelane nombhobho wekhabhoni wentsimbi ongatywinwanga, umbhobho wentsimbi engenasici, umbhobho we-titanium alloy, i-coil ekhethekileyo, kunye nolunye uvavanyo lombane olunamandla! Inemisebenzi yovavanyo lwangaphambi kokugungxula, uvavanyo lovavanyo loxinzelelo, umjelo, njl njl., Ulawulo lwe-PLC, ulwakhiwo oluphambili, ukusebenza okuzinzileyo.
Cinezela ngamanzi: Umatshini wokushicilela weHydraulic yenye yezixhobo zokuvavanya amandla wombhobho ogqabhukileyo.
Iimveliso zethu zoomatshini bokuvavanya hydraulic ziye zasetyenziswa kwiinkampani ezininzi, kwaye zaphumelela indumiso kunye nokwamkelwa kwabathengi abanetekhnoloji ephezulu kunye nokusebenza okuthembekileyo.
Izixhobo zemveliso ezihlanganisiweyo:
Nge-lathe ye-CNC, bonke abaqhubi badlulisile uqeqesho lobuchwephesha lobuchwephesha kwaye basebenza ngokungqinelana ngokungqongqo nomgangatho weshishini kunye nomgangatho we-ISO9001.
Indawo yokufafaza ezimeleyo yokuqinisekisa ukuba imveliso iyahlangabezana neemfuno zokhuselo lokusingqongileyo.
I-Suzhou Hanrui Electric Co., Ltd. iphumelele igama elihle ngoxinzelelo lwayo lwe-hydraulic, umbhobho oqhelekileyo we-ASTM, ixabiso lokukhuphisana kunye nenkonzo elungileyo emva kokuthengisa (ngakumbi ixesha elide lokubonelela ngezixhobo). Okwangoku, abathengi abavela e-Asiya, kuMbindi Mpuma, eMntla Melika naseYurophu baye basebenzisana nathi, kwaye izixhobo ezingekho semgangathweni zovavanyo / zokunyathela izixhobo zincede kakhulu abasebenzisi kukhuphiswano lweemarike.
Kuqhele ukusetyenziswa kuvavanyo lombhobho njengombhobho wesinyithi ongenamthungo, umbhobho wesinyithi ongenasici, umbhobho weetanium, umbhobho wobhedu kunye nombhobho wealuminium. Isiseko esikhulu senkampani yethu kukuvelisa umshicileli we-hydraulic ukubonelela ngezixhobo eziphambili kunye nezikumgangatho ophezulu wokuvavanya umsantsa kwimarike. Umatshini wokushicilela we-hydraulic unokwahlulwa lube luhlobo oluzenzekelayo kunye nohlobo lwencwadi. Uhlobo lwencwadi olunokuvavanywa kwimibhobho emine ngaxeshanye, kodwa lufuna umsebenzi wezandla. Ukubeka indawo, ukutywina, ukucofa kunye nokucinezela kuzenzekelayo. Ubude bombhobho bunokuhlengahlengiswa nge-2-15m ukuhlangabezana neemfuno zemibhobho eyahlukeneyo yomthengi.
Uhlobo oluzenzekelayo: ityhubhu enye kuphela inokuvavanywa ngexesha. Umbhobho ngokuzenzekelayo ungena kwi-rack, ngokuzenzekelayo izinto zokwenza izinto, iintlobo ezizenzekelayo, izikhundla, ukucoca, ukutywina, ukubamba kunye nokucinezela ngokuzenzekelayo; icandelo lephepha elisezantsi ngokuzenzekelayo lihlela ngokuzenzekelayo iimveliso ezizezona zinesiphene. Idlala indima ebalulekileyo kwimveliso yokwenyani. Enye kukonga iindleko, kodwa kokonga abasebenzi kunye nokuphucula izinga lokuhlaziywa kwemibhobho. Umatshini wokushicilela we-hydraulic oveliswa yinkampani yethu usetyenziswa ngokubanzi ekufumaneni umgangatho wemveliso yabavelisi bemibhobho, kwaye kubalulekile kwaye kubalulekile ekufumaneni nasekuqhumiseni izixhobo. Ngoku yenziwe ngempumelelo: uhlobo lwencwadi kunye nohlobo oluzenzekelayo.
Egqithileyo Isiguquli somoya
Okulandelayo: Rt-50fa Precision Double-Head Chamfering Umatshini / Round Tube Chamfering Machine
ICarbon Steel Tube Hydraulic Press
Horizontal fracturing Press
Isixhobo seHydraulic Press
Umatshini wokushicilela omkhulu weHydraulic
Umbhobho wesinyithi seHydraulic
Umbhobho weHydraulic Hydraulic Press
I-Titanium Tube Hydraulic Press
Amakhonkco ahambelana noko